﻿Download ULwimi lweNgcebiso yeSkrini sika-Microsoft Office from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
IiFemili zeMvelisoWindowsOfficeInkxasoImibuzoUHlaziyo lwe-Microsoft<meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://download.microsoft.com/download/5/4/A/54A1D4DB-777B-4D59-BC06-9F31148A6570/screentiplanguage_xh-za_32bit.exe" />Thank you for downloading
screentiplanguage_xh-za_32bit.exeRecommendedClick here1.5 MBClick here1.5 MB
screentiplanguage_xh-za_64bit.exeRecommendedClick here1.5 MBClick here1.5 MB
Ukufakela olu khutshelo:
Cofa i qhosha loKhutshelo kweli phepha ukuqalisa.
Enza enye yezilandelayo:
Ukuqalisa ufakelo ngokukhawuleza, cofa Qhuba.
Ukugcinela ukhutshelo kwikhompyutha yakho ufakelo kwixesha elizayo, cofa Gcina.
Ukurhoxisa ufakelo, cofa Rhoxa.
Ukucima okanye ukutshintsha uLwimi lweNgcebiso yeSkrini:
Cofa iqhosha leFayili ye-Office, khetha Okukhethwayo, khetha uLwimi ze usete uLwimi lweNgcebiso yeSkrini ku 'Lwimi loMboniso woYelelwano'. Ukususa olu khutshelo:
Usuka kwi menyu yokuQalisa, yiya kwi Paneli yoLawulo. Cofa ngokuphinda phindiweyo Ongeza/Susa iiNkqubo. Kuluhlu lweenkqubo ezifakelweyo ngokwangoku, khetha uLwimi lweNgcebiso yeSkrini sika-Microsoft Office, ze ngoko ucofe Susa okanye Ongeza/Susa. Ukuba ibhokisi yedayalogu iyavela, landela imiyalelo ukususa inkqubo. Cofa Ewe okanye KULUNGILE ukuqinisekisa ukuba ufuna ukususa inkqubo. IiDawunlowdi eziThandwayoIiFemili zeMveliso